admin, Author at Bright Khabar
पत्नीका बारेमा धेरै जोक बनाइन्छन त्यस्तै धेरै प्रेरणादायक भनाइहरु पनि छन्। तल तपाईले प्रेरणादायक, र हास्यास्पद पत्नीको बारेमा केहि पुराना भनाइहरू र पत्नी हितोपदेशको संग्रह भेट्टाउनुहुनेछ,जुन विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलन गरिएको हो । ” बिहे गर्नुमा खास बेफाइदा छैन , यदि श्रीमती असल परिन भने तिमी खुशी हुन्छौ खराब परिन भने तिमी दार्शनिक बन्छौ ” – […]
कुर्कुच्चा फुटेर बाक्लो अनि कडा सेतो छालाको लेउ लाग्ने समस्याले अधिकांशलाई सताइरहेको हुन्छ। वृद्धवृद्धाहरूलाई मात्रै नभएर युवा तथा प्रौढहरूमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्दछ। सबैले यसलाई ‘कुर्कुच्चा फुटेको’ भन्छन्, तर खासमा यो ‘फुटेको’ होइन। यहि नै शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली हो। तर यसलाई बेलैमा सफा नगरे, यसले विकराल रूप लिन सक्छ र निको नहुने गरी त्यहिँ […]
विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्स संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । ६४ वर्षका गेट्ससंग १ सय १० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १ सय २५ खर्ब ४० अर्ब सम्पत्ति रहेको छ । धनी व्यक्तिहरू केही काम नगर्ने, काम गर्नका लागि प्रशस्त नोकरहरू राख्ने, साथै उनीहरूको जीवन निकै तामझामका साथ बित्ने गर्छ । तर, […]
त्रिभुवन विमानस्थल प्रहरी प्रशासनले गायिका आस्था राउतमाथि कुनै दुर्व्यवहार नभएको बताएको छ। बिहिबार राउतले विमानस्थलमा तल्लो दर्जाका प्रहरीबाट आफूविरुद्ध दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रहरी संगठन विरुद्ध नै आक्रोश व्यक्त गर्दै फेसबुक लाइभ गरेपछि प्रहरीले उनीमाथि कुनै दुर्व्यवहार नभएको जनाएको हो। सार्वजनिक भएको सिसिटिभी फुटेज अनुसार हातमा कफीको कप बोकेर आएकी राउतलाई डिउटीमा खटिएकी महिला जवान रस्मी […]
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कन्युनिस्ट पार्टीले विवादको शिखरमा रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विरुद्धमा नेपाल बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । नेकपाले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए व्यापक जनताको सहभागितामा देशव्यापी भण्डाफोर आन्दोलन गर्ने बताउँदै हाललाई पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाले माघ १ देखि १५ गतेसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको […]
अमेरिकी सरकारद्वारा अफगानिस्तानमा बसालिएको अमेरिकी सैन्य अड्डामा लामो समय काम गरेका दाङका मेकेन्द्र भुशालले अमेरिकाले गर्ने क्रुर व्यावहार सहन गाह्रो हुने बताएका छन । अफगानिस्तान रहेको अमेरिकी आर्मी बेसक्याम्पमा सुरक्षा गार्डको रुपमा लामो समय काम गरेको अनुभव सुनाउदै उनले यो वा त्यो बहानामा अमेरिकी सेना नेपाल भित्र छिर्ने दाउ खोजिरहेकाले ५५ अर्वमा अमेरिकी सेना नेपाल […]
मरेर लानु के नै छ र दुई दिने जीन्दगीमा, त्यसैले धेरै लोभ लालच नगरेकै वेश, पढ्नुहोस आफ्नो जीवन बदल्नुहोस
हामि सबैलाई लाग्ने गर्छ कि मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ, मेरो यस्तो चिनजान छ, मेरो यस्तो बलियो छोरा – छोरी वा आफन्त छन् । तर याद गरौँ त ! के हामीलाई हाम्रो मृत्यु को समयमा इनले बचाउन सक्छन् ?आखिर जीवन छोटो छ । जतिसुकै लोभ र लालच गरे पनि एक दिन मर्नु नै छ । […]
बेडरुममा यी ५ चिज राखे सर्वनाश हुन्छ, आजै हटाउनुहोस्
रातको निन्द्राले एकातिर थकान मेट्छ भने अर्कातिर मानसिक शान्ति प्रदान गर्छ । तर सुत्ने समयमा गरिने स साना गल्तीले जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्या आइपर्न सक्छन् । वास्तु शास्त्रमा केही यस्ता चिजको बारेमा बताइएको छ जुन शयन कक्षमा राख्दा नकारात्मक शक्ति आकर्षित हुँने गर्छ । १. सुत्ने बेलामा कहिले पनि सिरानी तर्फ पानी पानी राख्नु हुँदैन […]
चितवन — भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरमा शुक्रबार बिहान गुडिरहेको ट्रकमा पछाडिबाट आउँदै गरेको पर्यटक बसले ठक्कर दिँदा ३३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये २१ जना चिनियाँ पर्यटक छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको लु२ख ३३०५ नं को ट्रकमा पछाडिबाट आउँदै गरेको बा१प ७८३ नं को पर्यटक बस बिहान ११:१५ […]
काठमाडौं । अहिले आधुनिक मोवाईल प्रविधिको जमाना छ । जो कोहीको हातमा मोवाईल फोन पुगेकै छ । त्यसमा अझ स्मार्ट फोनले बजार निकै तताएको छ । स्मार्ट फोनको जमानाले मानिसलाई निकै सहज तथा सरल बनाईदिएको छ । धेरै लामो समयमा बन्ने काम पनि सेकेण्ड भरमै सम्पन्न गराईदिन्छ । आजभोली मोवाईलको प्रयोग सूचना आदान प्रदान भन्दा […]